Ngaba isilungiso sokuQala siKhusela ukungabikho?
Uvavanyo lweMiller ngumgangatho osetyenziswayo yiinkantolo ukuchaza ukungcola. Ivela kwiNkundla ePhakamileyo yase-1973 ye-5-4 kwiMiller v. California, apho iJaji eliyiNtloko leWarren Burger, ukubhala uninzi, lugqithise ukuba izinto ezihlaziyileyo azikhuselwanga nguLungiso loLungiso .
Ulungiso Luni Lokuqala?
IsiHlomelo sokuQala siyinto eqinisekisa inkululeko yamaMelika. Sinokukhonza kunoma yiphi na ukholo esikhethayo, nanini na xa sikhetha.
Urhulumente akakwazi ukukhawulela ezi zinto. Sinelungelo lokuncenga urhulumente kwaye sihlangane. Kodwa uhlengahlengiso oluQala luyaziwa ngokuba yi lungelo lethu lokuthetha nenkululeko. Abantu baseMelika bangathetha iingqondo zabo ngaphandle kokwesaba ukuhlambalaza.
IsiHlomelo sokuQala sifunda kanje:
I-Congress ayiyi kwenza umthetho onxulumene nokusekwa kwenkolo, okanye ukuthintela ukusetyenziswa kwayo kwamahhala; okanye ukuphelisa inkululeko yokuthetha, okanye ye-press; okanye ilungelo labantu ngokudibanisa ukuhlangana, nokucela urhulumente ukuba alungise izikhalazo.
I-1973 iMiller v. California Decision
IJaji eliyiNtloko uBurger lathi iNkundla ePhakemeyo yichaza ukungcola:
Isikhokelo esisisiseko solu hlobo lwenyaniso kufuneka ukuba: (a) nokuba "umntu oqhelekileyo, osebenzisa imigangatho yoluntu yangoku" uya kufumana ukuba umsebenzi, uthathe ngokupheleleyo, unqabisa inzala ... (b) nokuba umsebenzi ibonisa okanye ichaze ngendlela ekhanyelayo, indlela yokuziphatha ngokwesondo echazwe ngokucacileyo ngumthetho welizwe, kwaye (c) nokuba umsebenzi, uthathe ngokupheleleyo, awunalo uqobo olunzulu lwezobugcisa, ezobugcisa, ezopolitiko okanye ixabiso lezesayensi. Ukuba umthetho we-obscenity umthetho ungagqityiwe, amaxabiso okuQuqulwa kokuQala akhuselwe ngokwaneleyo ngokuphononongwa ngokugqithisileyo kokubhenela kwamabango omgaqo-siseko xa kuyimfuneko.
Ukuyibeka kwimigqaliselo yoluhlu, le mibuzo ilandelayo iphendulwe:
Ingaba ibonisa ubulili?
Ngaba akunjalo ngaphandle?
Ngoko Kuthetha ntoni Oku?
IiNkundla ziye zathetha ngokuqhelekileyo ukuba ukuthengiswa nokuhanjiswa kwezinto ezingcolileyo azikhuselwanga nguLungiso LokuQala. Ngamanye amazwi, ungathetha ingqondo yakho ngokukhululekile, kuquka ukuhanjiswa kwezinto eziprintiweyo, ngaphandle kokuba ukhuthaza okanye uthetha ngento engcolileyo esekelwe kwimilinganiselo engentla.
Umntu omi kufuphi nawe, Umyinge uYoe, uya kukhubeka yiloo nto uthethile okanye wasasaza. Isenzo sesondo sichazwe okanye sichazwe. Kwaye amazwi akho kunye / okanye izinto aziphathelanga nenye injongo kodwa ukukhuthaza ukunyaniseka.
IsiHlomelo sokuQala sisebenza kuphela ukusabalalisa iifrafikhi okanye izinto ezingcolileyo. Akukukhuseli ukuba ulwabelana ngezinto okanye umemeza ophahleni ukuze bonke bakuve. Noko ke, unako ukuzithoba ngokuzenzekelayo ezo zinto usebenzisa kunye nokuzonwabisa ngenxa yokuba unelungelo lomgaqo-siseko lobumfihlo. Nangona kungekho sichibiyelo sichaza ngokuthe ngqo oku, izilungiso ezininzi zihlawula inkonzo yomlomo kumbandela wobumfihlo. IsiTshintsho sesithathu sivikela ikhaya lakho ngokungena ngokungenangqiqo, isiHlomelo sesihlanu siyakukhusela ngokuchasene nokuzihlengahlengisa kunye ne-Ninth Amendment ngokubanzi ixhasa ilungelo lakho lobumfihlo kuba lixhasa iBhili yamaLungelo. Nangona ilungelo alichazwe ngokucacileyo kwizilungiso zokuqala ezisibhozo, likhuselwe ukuba lichazwe kwiBhili yoLungelo.
Ngaba iHomeschool for You?
Yintoni ephakamileyo 40 ithetha?
Intetho yeIjiwaru ngesiJapan
I-Hippocrates - Ugqirha uHippocrates kunye neMicrosoft Medicine
Indlela yokwenza uMatza
Iingqungquthela ezijongene noRhwebo lweRhafu
Indlela yokwazisa i-Archangel Barachiel
Uvavanyo lokukhubazeka kwabazali
Upelo lwe siJamani
8 Iingcebiso malunga nokufunda isiTaliyane awunakuliva esikolweni